Fiarovana ny zon’ny mpanjifa: afaka miantso ny 812, saingy andoavam-bola | NewsMada
Fiarovana ny zon’ny mpanjifa: afaka miantso ny 812, saingy andoavam-bola
Nanova fomba fiasa ny minisi­teran’ny Indostria, varotra, sy asa tanana (Mica) ho fanamafisana ny fiarovana ny mpanjifa. Nofoanana manomboka izao ny laharana maitso 034 30 812 34, nosoloina laharana 812 fa andoavam-bola 100 Ar isaky ny antso, mitovy daholo avy amin’ny orinasa rehetra misehatra amin’ny fifandraisan-davitra. Natokana manokana ho an’ny mpanjifa io laharana 812 io manomboka ny alatsinainy hatramin’ny asabotsy, 7ora30 hatramin’ny 5 ora hariva.
Nampitomboina ny isan’ny mpiasa afaka mandray ny antso avy any amin’ny mpanjifa, nomena fiofanana izy ireo sy mampita ny hafatra, araka izay fitarainana voaray, any amin’ireo mpanara-maso midina eny an-tsena. Anisan’ny fepetra noraisin’ny minisitera izao fiarovana ny mpanjifa izao tamin’ny nametrahana hetsika Tsinjo, natomboka ny 15 marsa, Andro iraisam-pirenena ho an’ny zon’ny mpanjifa.
Mifandray amin’izay hetsika Tsinjo izay ny « Vatsy Tsinjo » hanampiana ireo sahirana manoloana ny valanaretina Covid-19. Tonga nanatitra izany fa­nampiana izany ny minisitry ny In­dostria, varotra, sy asa tanana, Rakotomalala Lantosoa, teny amin’ny kaominina Ambohitrimanjaka sy Ampangambe. Olona 3000 nisitraka ny fanampiana, niaraha-niasa tamin’ny sefo fokontany sy depiote. Marihina anefa fa betsaka, an-tapitrisany mihitsy ny olona tra-pahasahiranana amin’izao fotoana izao, tsy eto amin’ny faritra Analamanga ihany.